Mmeputakwa nke havortiya: esi ewepu ya, nakwa ihe ala na ite dị mkpa - Mkpụrụ ubi - 2020
Ụzọ nke mmeputakwa havortiya: esi transplant, ụdị ala na ite kwesịrị?
Haworthia bụ ụdị osisi herbaceous dị ntakịrị na-esite na ezinụlọ ahụ dị mma. Ha bụ ndị nkịtị na South Africa, nakwa n'Africa na Cape. A na-akpọ ụdị a ahazi Adrian Hardy.
N'akụkụ akwụkwọ ahụ mgbe ụfọdụ ọ dị nro, mgbe ụfọdụ a na-akwagharị ma ọ bụ kpuchie ya na ogologo oge. A na-ekpuchi akwụkwọ ụfọdụ nke na-acha ọcha trax tubercles. Ọtụtụ mgbe, osisi nke ụdị ihe a na-emepụta ọtụtụ Ome Ome. Osisi ahụ na-acha obere okooko osisi ọcha na-adịghị mma. Ọzọ n'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu esi agba ọkụ havortiya n'ụzọ ziri ezi.
Olee otú transplant?
Mgbe na ihe mere eji eme ya?
Lezie anya mgbe a gụchara ya
Kedu ihe bụ osisi a?
Haworthia bụ osisi na-eto eto, bụ nke obere obere na-eto. Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ osisi shrub n'enweghị ogwe ma ọ bụ obere ogwe. N'ịbụ okenye, nwere ike iru 12 cm n'ịdị elu. A na-eji ọtụtụ mkpịsị osisi dị iche iche eme ihe dị iche iche, ọ dị mma. Ha na-enwekarị mgbọrọgwụ ụmụ na akụkụ aka.
Akwụkwọ nke osisi ahụ dị na ala. Ha siri ike, leathery, anụ ahụ. Ọtụtụ mgbe, ha nwere ụdị ọdịdị. Ha nwere ike na-egbuke egbuke, elongated, ma ọ bụ belata na njedebe. Ọtụtụ mgbe, ha na-ejupụta na mbara ala nke nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke hillocks. Ha na-emepụta ahịrị ndị dị n'akụkụ. Ụcha nwere ike ịbụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ, ọ nwere ike ịnwe ụda aja aja.
N'okpuru ụfọdụ, ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ na-akpa ike, n'okpuru nke ahụ, e nwere anụ ahụ. Ntọala dị otú ahụ nwere ike ịmepụta sod, nke gụnyere scions. Osisi anaghị egosi uru pụrụ iche. Okooko osisi a nwere ọdịdị ikuku, ha na-eji mmanụ isii, nke na-etolite ọnụ na ala. Ha nwere agba chaa acha-acha ọcha ma ọ bụ acha odo odo.
Lezienụ anya! A ga-ewepụ ya na nsị n'ọdịnihu, ebe ọtụtụ ụdị nwere ike ịnwụ mgbe okooko.
Maka mmeputakwa a na-ejikarị akụkụ Ome, akwụkwọ ma ọ bụ osisi. A na-ewere ụzọ dị mfe nkewa nkewa ụmụ mgbe a na-atụgharị ha, ebe ọ bụ na ha nwere mgbọrọgwụ. Ị nwere ike itinye ha na ite dị iche iche. Site na nne na-akụ osisi dị mkpa iji bechapụ nlezianya ịkụpụ nwa nwanyị ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-akụ osisi ahụ na mkpụrụ tupu ya amalite.
Ugbu a, mkpụrụ osisi havortiya nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa ọ bụla nke ifuru, mana ị kwesịrị ịmara na nzụlite a na-ewe ọtụtụ oge. Ọ na-ejikarị ndị amateurs ma ọ bụ ndị na-azụ ụmụ.
Ị nwere ike mgba havortiya site na ịgwụ ma ọ bụ kewapụ akwụkwọ. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịkpụ ma ọ bụ mebie mkpịsị aka gị, na-agbanye n'akụkụ. Mgbe a hapụrụ ya ka ọ kpọọ nkụ maka ụbọchị 3. Ngwunye dị mma ga-esite na ájá. E kwesịrị ime ncha ọ bụla izu anọ. N'oge a, mgbọrọgwụ mbụ nwere ike ịpụta.
N'okpuru ebe a bụ vidiyo nke esi agba mgbanaka Xavortia
A ga-ahọrọ ite ahụ n'ogologo, ma ọ bụghị nke miri emi. Mgbe transplanting ala kwesịrị kpuchie na gravel. Lezienụ anya na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na e kere ala dị n'ụdị ugwu. E nwere ike ime ntancha n'akụkụ, n'ihi na osisi ahụ na-ewe oge iji gbanwee ebe ọhụrụ.
Nnukwu okpukpo n'oge akuku nwere ike iduga na ngbanwe nke usoro ejiji. A ghaghị transplanted na mmiri.
Ọ bụrụ na ala dị oke mmiri na mmiri dị n'ime ite ahụ, mgbe ahụ, a ga-ewepu osisi ahụ ma wepụ ihe mgbọrọgwụ niile. I nwekwara ike belata akụkụ ala nke steam ma ọ bụrụ na rotting na-ewere ọnọdụ na ya.
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ osisi nwere ike bụrụ ihe na-adịghị mma maka osisi ahụ, ọ bụrụ na ị na-agbaso ihe dị otú a - ekwesịghị ịdị na-agbaju mmiri. Ịkwesịrị ime ya naanị mgbe ala ahụ nwere ọdịdị dị mma.
Havortia kwesịrị igbanwe ya dị ka mkpa mgbe ite ahụ siri ike.
Na-eto eto na osisi kwesịrị ka a transplanted kwa afọ site 2-3 ugboro. Mkpụrụghari dị mma maka imezu na mmiri, na March. Osisi anaghị achọ nnukwu ite. Ma, ị kwesịrị ịṅa ntị na drainage oyi akwa, ebe ọ bụ na ọ bụ onye na-eme ka o doo anya na ezigbo uto n'ihi na ọ dịghị ekwe ka mmiri na-stagnate.
Khavortiyam ngwakọta kwesịrị ekwesị nke akwukwo ala na turf, ájá, peat na humus. Ịnwere ike ịgbakwunye ibe brik n'obere obere. Na-ejikarị ịzụta zụrụ maka ndị na-eri nri na cacti.
Ala maka havortiy kwesịrị itinye mmiri n'ime ụzọ dị mma, n'egbughị oge. O kwesiri ibu uzo, na-adighi nma. Mgbe mmiri, o kwesịrị ikwe ka mgbọrọgwụ na-eku ume. Ihe niile a chọrọ site na ngwakọta nke akụkụ anọ nke ụwa na akụkụ isii nke ntụ ntụ.
Epe ntụ ọka bụ ajịrịja dị mma. Otú ọ dị, ịnwere ike ịhọrọ ụrọ gbakwunyere, perlite, nkume apịtị, unyi, brik, plastik foam. N'ihi na mgbọrọgwụ adabara ngwakọta oriri na-edozi ahụ, nke ga-adị iche iche ájá.
N'okpuru ebe a bụ vidiyo banyere transplanting gravel:
Osimiri ahụ kwesịrị ịdị ala, nke na-adịghị emetụ. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ozuzu ya, osisi ahụ ga-amalite ịmalite ịdị omimi, ọ bụghị elu. Okpokoro nwere ike ime ka akwụkwọ daa mbà.
Nyere aka! Mgbe na-eto eto n'ụlọ, ọ ka mma ịhọrọ ite rọba, n'ihi na ebe mgbọrọgwụ na-amalite ịba.
A na-ebugharị ya dị ka usoro ozuzu nke havortiya na nkebi:
Were obosara buru ibu, nke na-emighị emeri. Ọ ghaghị ịgba gburugburu iji nwee ike ịmalite ịmalite ịmalite.
Ala ga-anọpụ iche ma ọ bụ alkaline. A na-eji ose na-eme ihe. N'ime ya, o kwesịrị inwe ájá, akwụkwọ, ahịhịa turf.
Ebe ọ bụ na osisi ahụ adịghị amasị mmiri na-asọ oyi, ọ dị ezigbo mkpa ịnya mmiri. A na-emeghe ala nke ite, nke ga-edozi mmiri mmiri.
A ghaghị inyocha osisi ahụ mgbe ọ dọpụsịrị ya. Ọnụnọ nke mgbọrọgwụ na akọrọ mgbọrọgwụ na-atụ aro na ọ dị ha mkpa ka ebipụ ha, na ebe ndị a na-egbute ha na unyi.
Mgbe ị na-atụgharị n'ime akpa ọhụrụ, a ghaghị ịkụ mmiri ahụ.
Mgbe transplantation ma ọ bụ mmeputakwa, havortiyu kwesịrị ikpebi ebe ebe ìhè anyanwụ adịghị ada. Mmiri kachasị mma nke ọdịnaya dị na okpomọkụ bụ site na 15 ruo 25, na n'oge oyi n'ime 10-12 degrees.
Agbara dị mkpa ijide 1-2 ugboro n'izu, ma anyị ekwesịghị ikwe ka mmiri daba n'etiti ohia. Na oke ịgbara ahụ mgbọrọgwụ ga-amalite ire ere, nke nwere ike ibute ọnwụ nke havortiya.
Ọ dị mkpa ka ifatilaiza mmiri a na-edozi otu ugboro n'ọnwa. N'otu oge ahụ, ị ​​nwere ike iji fatịlaịza maka osisi ornamental ma ọ bụ ngwọta na-adịghị ike nke ịnweta nri ịnweta.
N'ikpeazụ, ọ dị mma ịkọba na havortia bụ osisi, nke anaghị esiri ike ịmalite ma mụbaa dika o yiri. Naanị ịgbaso ntuziaka na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma.